Nin dukaalah magaciisana lagu sheegay Sheekh Ibraahim Maxamed Mursal oo dabley hubeysani ku dileen deeganka lafoole | Somalisan.com Home
Nin dukaalah magaciisana lagu sheegay Sheekh Ibraahim Maxamed Mursal oo dabley hubeysani ku dileen deeganka lafoole 6/19/2012 2:19:00 P
Warku wuxuu intaasi ku darayaa in kooxihii dilka geystay ayaa goobta ka baxsaday
Waxaa shalay deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeelaha Hoose lagu dilay Sheikh caan ahaa kana tirsanaa ganacsatada fara ku tiriska ah ee ku haray deegaankaasi, waxaana dilkiisa geystay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda KMG Soomaaliya. Sida warku sheegayo Sheekha la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Sheekh Ibraahim Maxamed Mursal, kaas oo la sheegay in dadka dilay ay u soo galeen gudaha goob ganacsi oo uu ku lahaa deegaanka Lafoole, kuwaas oo weediistay lacago baad ah ka dib markii uu ka diidayna halkaasi ku dileen.
Warku wuxuu intaasi ku darayaa in kooxihii dilka geystay ayaa goobta ka baxsaday, waxaana markaasi ka dib goobta gaaray ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dowladda KMG oo sheegay inay gacanta ku soo dhigi doonaan raggii dilka geystay, waxayna baaritano ay halkaasi ka sameeyeen ay ku qabqabteen dad ka agdhawaa goobta uu dilku ka dhacay.
Dadka yar ee ku harsan deegaanka Lafoole ayaa aad uga walaacay dilka loo geystay Sheekh Ibraahim oo ahaa nin si weyn looga yaqaanay Lafoole iyo deegaanada ku dhowdhow, mana jirto illaa iyo hadda cid sheegatay dilka Sheekhaasi ganacsadaha ah, sidoo kalena ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowladda KMG iyo maamulka gobolka Sh/hoose ee dowladda KMG oo ku aadan dilka loo geystay Sheekhaasi ganacsadaha ah.
Dhinaca kale degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa xalay lagu dilay qof rayid ahaa, kaas oo sida ay sheegeen dad goob joogjagaal ah ay dileen kooxo hubeysan oo goobta ka baxsaday markii ay dilka geysteen ka dib, waxaana isla markiiba goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda KMG oo halkaasi ka sameeyay baaritaano, inkastoo aan la sheegin cid ay u qabteen weerarkaasi dilka ah.
Dhannka kale habeen hore ayaa lagu dilay Isgoyska Siinaay nin ganacsade ahaa oo maqaayad ku lahaa gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha, kaas oo la sheegay in kooxo hubeysan oo dharcad ahi ay weydiiyeen isaga iyo rag la socday halka ay ka yimaadeen markii ay u sheegeen ay toogteen, taas oo aan la ogeyn ujeedada ay ka lahaayeen kooxahaasi dilka geystay.
Dilalkan kala duwan ee ay geysanayaan askarta dowladda KMG Soomaaliya ayaa waxa ayku soo aadayaan iyadoo Maxkamadda ciidanka dowladda KMG ay horey ugu hanjabtay inay dili doonto askarta ka tirsan dowladda ee dilaka iyo dhibaatooyinka ugu geysta dadka shacabka ah eek u nool gobolada ay gacanta ku heyso dowladda KMG.